Soomaaliya, 31 March 2019
Axad 31 March 2019
Muqdisho: Hawl-gallo Amni oo Dheeraad ah
Kadib maalmo ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho, qaraxyo galaaftey nafta dad badan oo ku noolaa Muqdisho ayaa markii ugu horeysay waxaa maamulka gobolka Banaadir uu sheegay inay jiri doonto howlgalo sugis amni ah oo gudaha caasimada laga qabanayo.
Nin loo Haysto inuu Diley Xaaskiisa oo lasoo Qabtey
Abdiaziiz Keerow oo ah nin lagu tuhunsanyahay xaaskiisa inuu kudiley magaalada San-Diego ayaa laga soo qabtey Panama
Kal-fadhigii 5aad ee Baarlamaanka oo Baaqday
Kulankii u horreeyey ee kalfadhigga 5aad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta u baaqday kooram la’aan. In kabadan 15 xildhibaan ayaa Guddoonka baarlamaanka u gudbiyay warqad ay ku dalbadeen in ajandaha kulanka maanta lagu darro arrimaha amniga.
Md. Biixi oo Wasiirro Shaqada ka Eryey
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xilalkii ka qaaday wasiirrada wasaaradaha Gaashaandhigga iyo Warfaafinta. Xilka qaadistan ayaa timid, kaddib markii xeer Ilaaliyaha Guud ee Somaliland dhawaan loo gudbiyay eedo musuq-maasuq oo ka dhan ah labadan wasiir.
Barnaamijka Dhacdooyinka ee toddobaadkan waxaad ku dhageysan doontaan qubanayaal ku saabsan siyaasadda Somalia
Faaqidaadda: Amniga magaalada Muqdisho
Barnaamijka Faaqidaadda waxa uu ku saabsan yahay amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo maalmahan sii xumaanayey, sababaha keenay iyo sida xal loogu heli karo.
Qarax dhimasho badan sababay oo ka dhacay Muqdisho
Ugu yaraan 12 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen, ku dhowaad 20 kalena ay ku dhaawacmeen qarax gaari loo adeegsaday oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Sugidda amniga Boosaaso oo laga shiray
Bandhigga VOA: Doorka samafalka ee yareynta saboolnimada
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in caawa fiidkii u qarax ka dhacay agagaarka Isgoyska Laba Dhagax meel u dhow cisbitaal ku yaalla agagaarkaasi.
Kal-fadhiga shanaad ee baarlamanka Somalia oo furmay
Kal-fadhigii shanaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdishe ee caasimadda Soomaaliya.
Dhaqanka iyo Hiddaha qeybta 464-aad